सात वर्ष, सम्झना र श्रद्धा सुमन !!! - Sainokhabar
होमपेज / देश / सात वर्ष, सम्झना र श्रद्धा सुमन !!!
सात वर्ष, सम्झना र श्रद्धा सुमन !!!
शनिबार, चैत ०१, २०७६ , साइनो खबर
अमित याक्थुङ्बा ’मिहाङ’
किशोरावस्थामा एकपटक काठमाडौंको यात्रा भयो । राजधानी कि त घुम्न कि जागिर खान, या पढ्न या भविष्य बनाउन जान्छन् । हामी दुई जना सन्त थलङ लिम्बु आम्भु र मचाहिँ कविता भन्ने भनेर १२ औँ घण्टामा धरानको देशी लाइनमा रहेको ’किराती भञ्ज्याङ’ उर्फ खोटाङ कम्युनिकेसनका प्रोप्राइटर कवि देवान किरातीबाट उधारोमा हवाई टिकट काटेर हुइकियौँ । सानो झोला, दुई जोर कपडा र आमालाई पाँच सय रूपैयाँ मागेर २०६२ को बर्खामा राजधानी जाने भइयो । विराटनगरबाट प्लेनको उडान समय परिवर्तन भयो । ११ बजे उड्ने यति एयरलाइन्सको जहाजले २ बजे मात्रै पखेटा फर्फराएर लाग्यो उत्तर पश्चिमको आकाश ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गेट बाहिरसम्म गोजीको पैसो जोगाउन हिँडियो । ट्याक्सीवालाहरू मोलमोलाइ गर्न थाले । हामी नटेरी पुग्यौं बाहिर । अराजक कवि राजन मुकारुङ दाजु, कवि उपेन्द्र सुब्बा दाजुको निम्तो र माटोको कविता सुनाउने सुरमा लाग्दालाग्दै समय चिप्लिन थाल्यो । जावलाखेलको हल पुग्दा कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुग्दै थिएछ । हामीले स्थिति बुझेर गोजीमा राखेको टुक्रा सुनाउने मनसाय हापिदियौँ । खाजापानीसम्म चाहिँ भ्याउने काम भयो । कार्यक्रम सकेपछि राजन दाजुको टोलीले कोटेश्वर पुर्‍याउन खोज्दै थियो । तर, डब्बल सुब्बा उर्फ रूद्र नाल्वो जो थलङ दाजुका सहपाठी थिए । कपन लाने भए । कोटेश्वर बसाइँ केही दिनपछि सुरु भयो । कोटेश्वर कुटीबाट ’हेत्छाकुप्पा’ र ’लाटो पहाड’ जन्मँदै थियोे । जसले केही वर्ष र दरशकपछि तहल्का मच्चाउनेवाला थियोे । तर, काठमाडौं बसाइँको पहिलो साँझ युवराज लिम्बुलाई भेट्ने मौका जुर्‍यो ।
गृहजिल्ला ताप्लेजुङ साँघुका रहेछन् युवराज लुङ्वा । पातलो शरीर, मध्यम उचाइ, लामो कपाल र हरदम बोक्ने घरबुना झोला । त्यो साँझ, कवि खुक्सङ खम्बूसँग पनि भेट भएको थियोे । युुवराज लुङ्वासँग पत्रकारिता, साहित्य, राजनीति र समुदायको बारे मध्यरातसम्म गफ भए । उनी आर आर क्याम्पसमा पत्रकारिता पढ्दै थिए । विद्यार्थी राजनीतिको गफ नछुट्ने कुरै भएन । उनको साद्गीपन र बौद्धिक चेतनाले जोकोही प्रभावित हुन सक्थे । काठमाडौंबाट फिर्ता भएपछि धेरै वर्ष भेट हुन पाएन । यदाकदा पूर्वका कार्यक्रममा देखादेख हुन्थ्यो । लामो बसाइँ हुन्थेन । २०६५ मा धरानमा भएको लिम्बु विद्यार्थी मञ्चको चौथो महाधिवेशनमा भने एकपटक पुनः भेट भयो । अग्रसेन भवनमा गफ गर्दै विद्यार्थी नेताहरूसँग महाधिवेशनको रात व्यतीत भयो । त्यसपछि फेरि सम्पर्क टुट्यो ।
युवराज फागो चोङ्वाङ्
युवराज फागो चोङ्वाङ्सँग एकैपटक २०६९ मा भेट भयो । सुस्ताएको लिम्बु पत्रकार सङ्घलाई ब्युताउँन भनेर संयोजक देबेन्द्र खापुङ दाजुको टिम लागिपरेका रहेछन् । याक्थुङ चुम्लुङ हिममा फागुन अन्तिम साता सङ्घको पहिलो महाधिवेशनका लागि लिम्बुवान र राजधानीबाट पत्रकारहरू भेला भए । सुनसरी टिममा भएको कारण हामी व्यवस्थापक जिल्ला भयौँ । सबैलाई स्वागत गर्ने क्रममा गोरखाज साप्ताहिकमा काम गरिरहेका उहीँ युवराज लिम्बुसँग पुनः भेट भयो । तर, यसपटक मलिन र अस्वस्थ देखिन्थेँ । न्यून रक्तचापले ग्रसित लिम्बु सचिव भएका कारण कार्यक्रम चलाउनुपर्ने भयो । मसिनो स्वरमा महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूलाई जोड दिएर कुरा राख्थे । लिम्बु पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र एक्सपोजर कार्यशालाहरू राख्नुपर्ने विचार राखे । हार्ड न्यूज नभएर फिचर लेखन र खोजमूलक सामग्रीमा बल गर्नुपर्ने उनको धारणा थियोे । उनको भिजन, क्षमता र अनुभवलाई सबैले सकारे । उनी महाधिवेशनबाट पहिलो निर्वा्चित अध्यक्ष भए ।
चुम्लुङ हिमबाट हामी सबै छुट्टियौँ । तर, २४ घण्टा नबित्दै अशुभ खबर आयो । मित्र सन्तोष कुरुम्बाङले म्यासेज टेक्स्ट गरे (’तपाईहरूको अध्यक्ष सुतेको ठाउँबाट उठ्नुभएन ।’ हातखुट्टा गल्यो सुनेर । यसअघि, पनि एक विद्यार्थी मित्रलाई हामीले त्यसरी गुमाइसकेका थियौं । दिउँसो इटहरी झर्‍यौँ । देवेन्द्र खापुङ दाजुको ससुरालीमा अघिल्लो साँझ झरेका रहेछन् दुवै । एक दिन त्यहाँ बसेर लिम्बु मोरङको इटहरामा भएको घर र त्यसपछि पान्थरमा रहेको ससुराली उक्लने योजनामा थिएछन् । उनको यात्राको सपना अधुरै भयो । त्योभन्दा सङ्घले तय गर्नेवाला यात्राका नायक कहिले नउठ्ने गरी विश्राम लिए । २०६९ चैत एक गते समुदाय र राष्ट्रले एक होनहार सञ्चारकर्मी गुमायो । हामी स्तब्ध थियौं । केही दिनपछि उनको माई खोलामा अन्त्येष्टि भयो । भाउजू र छ महिना मात्रै भएकी छोरीमा बज्रपात भयो ।
भेट भएको सात वर्षपछि उनलाई गुमाया‌ैँ । आज उनले यस संसारबाट भौतिक रूपबाट बिदा लिएको ठ्याक्कै सात वर्ष पुगेको छ । यस घडीमा पुनः लिम्बु पत्रकार सङ्घका पहिलो निर्वा्चित अध्यक्ष युवराज फागो चोङ्वाङ्प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली छ । तागेरानिङ्वाफु युमामाङले उनको आत्मालाई शान्ति प्रदान गरून् ।
:अमित याक्थुङ्बा ’मिहाङ’ लिम्बु पत्रकार सङ्घ, यूकेका संयोजक हुन् ।